Fambolena biolojika: mamelona tantsaha miisa 48.000 | NewsMada
Fambolena biolojika: mamelona tantsaha miisa 48.000
Par Taratra sur 16/05/2020
Mitondra tombontsoa ara-toekarena eto an-toerana sy ny varotra ivelany ho an’i Madagasikara ny fananana lalàna mazava mifehy ny fambolena biolojika. Manome antoka ny mpamboly sy ny mpandraharaha ihany koa.
Nankatoavin’ny solombavambahoaka, tsy nisy nitsipaka, ny talata 12 mey teo, ny volavolan-dalàna mamaritra ny fambolena biolojika. Nambaran’ny minisitry ny Fambolena, Ranarivelo Lucien, fa hitondra ainga vao hampiroborobo bebe kokoa ny sehatry ny fambolena, indrindra ny tsy fampiasana akora simika, biolojika ity lalàna ity. Antony, maro ireo mitonona na milaza fa mamboly biolojika, nefa tsy nisy ny rafitra sy ny lalàna tena namaritra azy ireny, ary ao anatin’izany ny fanomezan-danja azy, mampiakatra ny kalitao sy ny vidin’ny vokatra.
Mamboly vary indroa isan-taona
Manodidina ny 48.000 ny tantsaha malagasy mivelona aminy, ary mitentina 110 miliara dolara ny tombambidin’ny vola tokony haterany. Nilaza ny depiote voafidy tanyAntsiranana II, fa anisan’ny efa tena mampiasa ny fomba fambolena tsy mampiasa akora simika, toy ny zezika sy ny fanafodim-biby, ny tantsaha any avaratry ny Nosy any amin’ny distrika Antsiranana II. Mahavokatra anefa ny tany, ary afaka mamboly vary indroa isan-taona ny tantsaha anaty rano sy ny vary an-tanety eny amin’ny baiboho. Maherin’ny 7.000 ny tantsaha mivelona aminy.
Efa hatramin’ny taona 1980 no namantarana ny fambolena biolojika teto amintsika.
Manodidina ny 140 ny orinasa mivondrona ao anatin’ny Sendikà Malagasy misehatra amin’ny fambolena biolojika (Symabio), niara-namolavola tamin’ny minisiteran’ny Fambolena ity volavolan-dalàna ity. Anisan’ny voly atao ny vary, ny legioma, ny voankazo, ny zavamaniry fakana ilomenaka, sns.